Munamato kuna Musande Mikaeri Ngirozi huru yeRudo.? Vavengi uye Kudzivirirwa.
Munamato kuMutsvene Michael Mutumwa mukuru ndiko kupinda nyika izere nehondo yemweya sezvo Mutumwa mukuru uyu, uyo anowanikwa munyaya dzemubhaibheri, anomiririrwa semhare kubva kudenga anotumwa pasi kuzorwa hondo dzedu dzemweya.
Tinogona kukumbira rubatsiro rwako chero nguva yatinozvida, anogara achida kutibatsira kurwira pamweya idzo hondo dzisingagoni kurwiwa munyama.
1 Munamato kuMutsvene Michael Mutumwa mukuru ndiani Mutumwa Michael Mutumwa mukuru?
1.1 Munamato kuMutsvene Michael Ngirozi huru yerudo
1.2 Munamato weMutsvene Michael Mutumwa mukuru kurwisa vavengi
1.3 Munamato wekudzivirira
1.4 Munamato kuti uwane basa
2 Musande uyu ane simba here?
Munamato kuMutsvene Michael Mutumwa mukuru ndiani Mutumwa Michael Mutumwa mukuru?
Kuti utsanangure kuti San Miguel ndiani, tinogona kutanga nekutaura kuti zita rake rine chirevo chekuti Ndiani saMwari.
Imwe kwengirozi huru sezvo zita rake rinotaurwa mune zvinyorwa zvitsvene tevere Ngirozi huru Rafael naGabriel. Kapteni wemauto ekudenga nedzimwe ngirozi vanoteerera zvaakaraira.
Kubva pamavambo kwekutenda kwechiKristu, St. Michael anoonekwa semurwi akakwanisa kukunda muvengi akaipa Satani nemadhimoni ake ese nebakatwa rake remoto rine simba.
Iye muchengeti uye akatendeka mudziviriri izvo zvinochengetedza hupenyu hwedu, mhuri nepfuma zvakanaka.
Munamato kuMutsvene Michael Ngirozi huru yerudo
Mwari vakuponese, ngirozi huru St. Michael unokunda, wakakomborerwa uye unokudzwa zvikuru mutumwa waMwari uye zvikuru anofadzwa naye, nhasi mukurwadziwa kwangu ndinokumbira, ndinokudana nekutenda, uye ndinokumbira rubatsiro rwako runobatsira nekudzivirira;
Ndinokukumbira kuti uparadze simba rose rakaipa rinogona kunge riri kundikanganisa, undifukidze nechiedza chako uye nesimba rako rinoshanda uye rinokurumidza kundireverera kuti ndione zvishuwo zvangu zvichizadziswa.
Ngirozi huru Michael muchengeti wemasuwo eDenga, ndinokupai moyo wangu unozvininipisa pamusoro peshumiro yamunogara muchindipa uye nei ndichiziva kuti muchandibatsira mumatambudziko erudo:
(taura zvaunoda kuzadzisa)
Oo, ngirozi huru Michael, muchinda wekudenga, ngirozi yangu yekuchengetedza! Ini nekuzvininipisa ndinokumbira kuti muteerere inzwi rangu uye muise mumoyo mangu rugare runotapira rwandinoshuvira.
Handikwanise kugara murunyararo uye mweya wangu uzere nekusadzikama.
Ini ndinogona chete kurapa chirwere changu uye kudzinga kushungurudzika kwangu nerudo rwe:
Ooh, ngirozi huru Michael, muchinda wekudenga, ngirozi yangu yekuchengetedza, teerera inzwi rangu! Muzita raBaba, muzita roMwanakomana, uye muzita reMweya Mutsvene.
Connoisseur zverudo rwechokwadi uye rudo rusingaperi, izere nerudo rweVamwari runodzingwa naBaba Vekudenga pachavo nekuvapo kwavo.
Hapana mumwe ari nani kupfuura iye kutibatsira isu nenyaya dze mwoyo dzinounza kushushikana kwakawanda kuhupenyu hwedu.
Kungave kuwana rudo, kururamisa mugwagwa, kugadzirisa hukama kana kutitungamira kuita sarudzo dzakanaka dzakakosha.
Ngatijekesei nzira chaiyo yatinofanira kutora uye kutibatsira nguva dzese.
Munamato weMutsvene Michael Mutumwa mukuru kurwisa vavengi
Kubwinya San Miguel ArcangelIwe wakarwa hondo dzinotyisa pamusoro pevatumwa vezvakaipa neruvengo;
iwe wakabuda uchikunda paupenzi hwemuvengi neakaipa;
iwe unobuda mukukunda kubva mumisungo yakaipa yemuchinda werima, uchengetedze vanhu vese kubva pamabvi ake, ndinokukumbira kuti undipe kuchengetedzwa kwako kubva kune vese avo vanoshuva zvakaipa uye nekudzivirira zvombo zveadhiabhori kuti zvisandidzwe.
Chengetedza vavengi vakanyarara, vezvakaipa, uye undibatsire kuve zvakanaka kuti, nemafungiro angu, hapana anogumbura kana kugumbuka, uye pane zvinopesana, anogara murunyararo nevanhu kuti vauye kuna Mwari zvine kukudzwa.
Ndipei kukunda muhondo kubva kune vese vavengi nekuipa.
Iyo nyaya inotaura mafambiro aakaita kubva kukunda vavengi kusvikira vakandwa kunze kwedenga.
La Bhaibheri Anomuratidza semurwi ane simba anogona kuvimbwa kutibatsira kurwisa hondo dzemweya nedzemweya nguva dzese.
Vavengi ndivo chikonzero chekushushikana nekuti nguva zhinji kurwira kana kusawirirana zvinoitika muupenyu hwedu.
Kuve nemubatsiri kudenga uyo anouya kuzodanwa kwedu kwakakosha nekuti kurwa pamweya kuri nani zvakanyanya kupinda kupinda mumatare nemhandu idzo dzinotitsamwisa kwazvo.
Iwe unokudzwa Mutsvene Michael Mutumwa mukuru, Muchinda uye mutungamiri wehondo dzokudenga,
Custodian nemudziviriri wemweya, muchengeti weChechi, kukunda, kutya nekuvhundutsa mweya yakapandukira.
Isu tinokukumbirisai tichizvininipisa, kuti mutire kununura kubva kuzvakaipa zvese kune avo vatinotendeukira nekuvimba.
ngoni dzenyu dzitidzivirire, simba renyu rirege kutidzivirira, uye kuti, kubudikidza nekudzivirirwa kwedu kusingaenzeke, isu tisimukire mukushanda kwaIshe.
hunhu hwako ngautitambire zuva rega rega rehupenyu hwedu, kunyanya mukutambudzika kwe rufu, kuitira kuti, udzivirirwe nesimba rako kubva kudhiragoni ine moto nemisungo yayo yese, patichasiya nyika ino tichaunzwa newe, tisina mhosva, pamberi paVamwari.
Kana iwe uchida kudzivirirwa, uyu ndiwo munyengetero weStandard Michael Archangel.
Muranda akatendeka uyo anopa kuchengetedza kwake nekutarisira kune vana vaMwari vari pano pasi uye iye, sezvaakatumirwa munguva yakapfuura kuti atipe nguva yekuchengeta, anozoita zvakare nesu.
Anochengetedza ane masimba anochengetedza mhuri yedu uye zvinhu zvekuchengetedza zvinhu.
Simudza una oración zuva nezuva rinotichengeta nekutenda kwekuti pane mumwe munhu ari kutitarisira kubva pane zvakaipa zvese uye nengozi dzinogara dzakavengana muhupenyu hwedu hwezuva nezuva.
Munamato kuti uwane basa
Great San Miguel Mutumwa mukuru, kuti iwe ugere padivi peWekumusoro-soro.
Musi uyu ndauya ndakakotama kuti ndikukumbire kuti usatomborasikirwa nebasa.
Vanhu vazhinji kunze kwangu vanovimba nazvo. Ini chete tariro yekuropafadza chikomborero chako kwanhasi, mangwana uye nguva dzose kuti ndiwane basa rangu kubereke uye nemhedzisiro yakanaka. Ndinoziva kwazvo kuti iwe wakasunungura mweya yakarasika kubva kupurigatori.
Ndinokukumbira kuti uite basa rangu riite chibereko zuva rega rega sezvo rave kusvika zvino.
Ini ndinoda kubatsira nemavambo ebasa, nekuti nezvakadaro ndichanzwa kugutsikana neni kana ndaona kuti vashandi vangu vanonakidzwa nebasa racho neni.
Mutsvene Michael Mutumwa mukuru, munyengeterere isu uye muteerere kune aya mazwi.
Namata the munamato waMutsvene Michael Mutumwa mukuru kuwana basa nekutenda kwakawanda.
Hushumiri hwake hwevatumwa anotarisawo pane rubatsiro rwevaya vasina kufarirwa, ndosaka munamato kuna St. Michael kuwana basa Inova chombo chine simba chatinogona kushandisa tisati taita kubvunzurudzwa kwebasa kutibatsira uye kutipa nyasha pamberi pevamwe.
Kereke yemuKatorike yepasi rose inotikoka kuti tizvipire kune uyu mutumwa mukuru nekutenda, tichitenda kuti anogona kutibatsira kuwana basa rakakodzera isu, kuzvidzivirira panjodzi dzipi nedzipi, kuzvidzivirira pazvakaipa zvese uye kutitarisisa.
Hatigone kusimudza munamato nekuda kwechimwe chikonzero kana tikasazviita tichitenda kubva pamoyo kuti kubva kudenga chishamiso chatinoda tichapihwa kwatiri.
Musande uyu ane simba here?
Ehe, hapana mhinduro yakajeka uye yakananga kupfuura iyo.
Isu tinotenda nokutenda zvinotaurwa neshoko raMwari nezveminamato uye ndosaka tichitenda kuti kana tikasimudza munamato kuSt.
Isu tinongofanira kuve nekutenda mukati kana tichinamata rine simba munamato kuMutumwa Michael Mutumwa mukuru.
Chitsvene Mako, munamato une simba
Simba rekunamatira reSande Charbel